အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့နိုင်ပွဲကို အားရပါးရအောင်ပွဲခံနေတာ ယာဂန်ကလော့ပ်များလား? |
ရာဇဝင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၂၀ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲအပြီးမှာ အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေ အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပြီး
အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတာက လီဗာပူးလ်နည်းပြကြီးယာဂန်ကလော့ပ်ပါ ဘီယာတွေသောက်ပြီးတော့ အားရပါးရအောင်ပွဲခံနေတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ အဲဒီလူက ယာဂန်ကလော့ပ်ပါလို့ အားလုံးက သေချာပေါက်ထင်ကြမှာပါ။
သူက လီဗာပူးလ်တံဆိပ်ပါတဲ့ Track suit ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ယာဂန်ကလော့ပ်လိုမျိုး မျက်မှန်၊ လီဗာပူးလ်တံဆိပ်နဲ့ဦးထုပ်ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့် မသိရင် ယာဂန်ကလော့ပ်ကြီး အင်္ဂလန်အသင်းကို အားပေးနေတာလားလို့တောင် ထင်စရာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူက ယာဂန်ကလော့ပ်နဲ့ချွတ်စွပ်တူတဲ့ အင်္ဂလန်ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူက ယာဂန်ကလော့ပ်နဲ့တူလွန်းတာကြောင့် နာမည်ကျော် ဗြိတိန်ရုပ်သံလိုင်း ITV ရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ(Presenter)ဂျိုနသန်ဆွင်းတောင် ယာဂန်ကလော့ပ်လို့အထင်မှားရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျိုနသန်ဆွင်းဟာ အင်္ဂလန်-ဂျာမနီပွဲအပြီး ဝင်ဘလေကွင်းနားမှာ သတင်းတင်ဆက်နေတုန်း ယာဂန်ကလော့ပ်နဲ့တူတဲ့ ပရိသတ်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး
ဂျိုနသန်ဆွင်းက “ကျွန်တော် ဝင်ဘလေကွင်းထဲ သွားနေတုန်းမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ဂျာမန်နည်းပြကြီး ယာဂန်ကလော့ပ်နဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အင်္ဂလန်အသင်းပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူ အောင်ပွဲခံပြီး ပွဲအပြီးမှာ ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ဂုတ်ပေါ်ခွထိုင်ပြီးတော့ ဘီယာသောက်ရင်းအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့ပ်ရဲ့ အပြုအမူက မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ”လို့ မှားယွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်နဲ့လီဗာပူးလ်တို့ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကလည်း ယာဂန်ကလော့ပ်နဲ့ချွတ်စွပ်တူတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ရုပ်ပုံက လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုလူက အဲဒီတုန်းက ပရိသတ်ပဲလားဆိုတာတော့ အတိအကျမသိပါဘူး။
ဒီအဖြစ်အပျက်က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Hit ဖြစ်နေပြီး ပရိသတ်တချို့ကတော့ ဒီလူက ယာဂန်ကလော့ပ်လို့ထင်နေကြဆဲပါပဲ . . .
အဂၤလန္အသင္းရဲ႕ႏိုင္ပြဲကို အားရပါးရေအာင္ပြဲခံေနတာ ယာဂန္ကေလာ့ပ္မ်ားလား?
ရာဇဝင္ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ယူ႐ို-၂၀၂၀ရႈံးထြက္(၁၆)သင္းအဆင့္ပြဲအၿပီးမွာ အဂၤလန္ပရိသတ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကၿပီး အံ့အားသင့္ဖို႔ေကာင္းတာက လီဗာပူးလ္နည္းျပႀကီးယာဂန္ကေလာ့ပ္ပါ ဘီယာေတြေသာက္ၿပီးေတာ့ အားရပါးရေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ ႐ုပ္ပုံေတြ ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အဲဒီလူက ယာဂန္ကေလာ့ပ္ပါလို႔ အားလုံးက ေသခ်ာေပါက္ထင္ၾကမွာပါ။
သူက လီဗာပူးလ္တံဆိပ္ပါတဲ့ Track suit ကို ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ယာဂန္ကေလာ့ပ္လိုမ်ိဳး မ်က္မွန္၊ လီဗာပူးလ္တံဆိပ္နဲ႔ဦးထုပ္ကိုလည္း ဝတ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ မသိရင္ ယာဂန္ကေလာ့ပ္ႀကီး အဂၤလန္အသင္းကို အားေပးေနတာလားလို႔ေတာင္ ထင္စရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလူက ယာဂန္ကေလာ့ပ္နဲ႔ခြၽတ္စြပ္တူတဲ့ အဂၤလန္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူက ယာဂန္ကေလာ့ပ္နဲ႔တူလြန္းတာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိတိန္႐ုပ္သံလိုင္း ITV ရဲ႕ သတင္းတင္ဆက္သူ(Presenter)ဂ်ိဳနသန္ဆြင္းေတာင္ ယာဂန္ကေလာ့ပ္လို႔အထင္မွားရတဲ့အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ိဳနသန္ဆြင္းဟာ အဂၤလန္-ဂ်ာမနီပြဲအၿပီး ဝင္ဘေလကြင္းနားမွာ သတင္းတင္ဆက္ေနတုန္း ယာဂန္ကေလာ့ပ္နဲ႔တူတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ဆုံေတြ႕ခဲ့ၿပီး ဂ်ိဳနသန္ဆြင္းက “ကြၽန္ေတာ္ ဝင္ဘေလကြင္းထဲ သြားေနတုန္းမွာ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ဂ်ာမန္နည္းျပႀကီး ယာဂန္ကေလာ့ပ္နဲ႔ ဆုံေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အဂၤလန္အသင္းပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူတူ ေအာင္ပြဲခံၿပီး ပြဲအၿပီးမွာ ပရိသတ္တစ္ဦးရဲ႕ဂုတ္ေပၚခြထိုင္ၿပီးေတာ့ ဘီယာေသာက္ရင္းအႀကီးအက်ယ္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။
ယာဂန္ကေလာ့ပ္ရဲ႕ အျပဳအမူက မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ”လို႔ မွားယြင္းေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲျဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္နဲ႔လီဗာပူးလ္တို႔ပြဲမတိုင္ခင္တုန္းကလည္း ယာဂန္ကေလာ့ပ္နဲ႔ခြၽတ္စြပ္တူတဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦးရဲ႕႐ုပ္ပုံက လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး အခုလူက အဲဒီတုန္းက ပရိသတ္ပဲလားဆိုတာေတာ့ အတိအက်မသိပါဘူး။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က အြန္လိုင္းေပၚမွာ Hit ျဖစ္ေနၿပီး ပရိသတ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလူက ယာဂန္ကေလာ့ပ္လို႔ထင္ေနၾကဆဲပါပဲ . . .
ဇနီးချောတွေနဲ့ ခဏ ပြန်ဆုံခွင့်ရတဲ့ အင်္ဂလန်သားတွေ နှင့် နောက်တစ်ဆင့်ပွဲကိုကြည့်ဖို့ ခက်တဲ့ ပရိသတ်တွေ